ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ရုပ်သေးသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်း
ရုပ်သေးသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်း
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ၆၈ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှသည် သမ္မတရာထူး သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်အထိ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ ကြိုးဆွဲရာ ကနေရသော ရှက်ဖွယ် ရုပ်သေးသမ္မတအဖြစ်မှ ရုန်းထွက်လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ ...။
ရုပ်သေးသမ္မတမှသည် ပြည်သူများ၊ လက်ရှိ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များနှင့် လက်တွဲ၍ တိုင်းရင်းသားပြည်သူပေါင်းစုံ လိုလားတောင့်တသော ...
- စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ်အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေး၊
- ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ ဖျက်သိမ်းရေး၊
- တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို အနှောက်အယှက်ပြုနေသည့် စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ၊ ခရိုနီများ၊ ဘာသာရေး-လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပွားအောင် ဖန်တီး လှုံ့ဆော် အားပေး အကြမ်းဖက်သူများကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖော်ထုတ် အရေးယူ အပြစ်ပေးရေး ... စသည့် အရေးကိစ္စများကို သတ္တိရှိရှိ ရွက်ဆောင်ရဲသော ပြည်သူ့သမ္မတအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိအောင် အားထုတ်ကြိုးပမ်းနိုင်ပါစေ ...။ ။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:35 PM
thaung wai said...
ဦးသိန်းစိန် ရုပ်သေးလိုကြိုးဆွဲရာကိုမကဘဲ ပြည်ထောင်စုကို တိုးတက်အောင်ကြိုးစားပါ ၁၉၄၈ခုနှစ်ကပင်၂၀၁၃နှစ် ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးစဉ်းစားပေးပါ
သမ္မတကြီး ကြည့်ရတာ ဆရာကိုကာမပြန်နိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေရောက်နေပေမဲ့ ပင်ကိုစိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့ပုံ တွေ့ရပါတယ်၊ သူ့ဆရာရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်မှာသာ မရှိခဲ့ရင် တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်စိတ်ရင်းစေတနာ ထားမယ့်သူပါ။ နားလည်ပေးလိုက်ကြပါ။
five O two said...
say ta nar the lu ti nit ma tan!!!
if there is any person able perform better than current President, very warmly welcome! If There is no person able to perform as current President, we should support him instead of saying nonsense. I don't think DASSK isafuture Good-President of Myanmar. She is selfish and only think about to upgrade her role in International. She may not able to serve to our Myanmar people as Good-President. She is not Love Myanmar People as Her Father. She is trying to disappear Myanmar people and religion and country in Future. People can be seen recent happen serious rioting case in Rakhine, Meikhtila, Yangon. One time she said "She will never call those people "kalar" bcoz it is dis respectable to those people. But She still love to say Myanmar Old name as "Burma".
I am not pro-junta, not pro-Government,not pro-NLD. But last time i am pro-NLD. But now I so upset about NLD president response and activities. She is well educated person. but LESS NATION SPIRIT. I really don't know how to accept as our leader??? I am hoping many good Myanmar Leader appear soon. Is there no leader after DASSK? If she die unexpectedly, who will take over her place??? No other good leader at NLD?? anywhere else???
kobo chit said...
ပြာပုံထဲကအခုမှထတာ နဲနဲတော့ သီခံရမှာပေါ့